Ukubukezwa kwe-Semalt: Isevisi Yokususa Isikrini Esesabekayo
I-Web2DB iyisitoreji esinamandla nesilusizo sokukhipha isikrini nethuluzi lokukhipha idatha. Isebenza njengomakhi we-database futhi isivumela ukuba sithume ulwazi lwamawebhusayithi ahlukene kalula. Lokhu web scraper iqoqa ulwazi olungakhiwe kusuka kumawebhusayithi namakhasi we-HTML futhi luhlela futhi luyifake kahle - template completo blogger. Kufanele usho ukuthi yini ofuna ukuyihlola nokuthi ufuna ukufometha kanjani idatha yakho, futhi i-Web2DB izokwenza umsebenzi wayo ngokuya ngemiyalelo. Idatha ingagcinwa kumafomethi we-MySQL, CSV, Access and Excel. I-Web2DB inomcebo wezici ezenza kube yindlela engcono kakhulu kubangani bewebhu, amabhizinisi, abomabhizinisi, abahleli, namakhodi. Ezinye zezici zayo ezihlukile zixoxwe ngezansi.
1. Njengomhleli weProjekthi:
i-Web2DB isebenza njengomhleli wephrojekthi onamandla futhi omangalisayo. Ukuklama amaphrojekthi we-web scraping akulula kuze kube yilapho unamakhono okwenza uhlelo olwanele. Kodwa nge-Web2DB, akudingeki ukuba ube ngumqambi osebenzayo noma ikhodididi ngoba ungenza imisebenzi yakho ngaphandle kwayo. Leli thuluzi lizoqoqa, lihlele, lishaye noma lisuse idatha yakho. Ngaphezu kwalokho, kusiza ekuthuthukiseni amaphethini wedatha ehlukene asebenza kahle ngisho nalapho isakhiwo sekhasi sesishintshile. Wonke amaphrojekthi akho ahleliwe nokuhlelwa kwezizinda ayenziwa ngokuchofoza okumbalwa nje.
2. Ukuthutha kalula Isakhiwo Sokuqukethwe Okuphelele:
Ungalungisa iWeb2DB ukulanda yonke iwebhusayithi noma amanye amakhasi ayo. Ilula kalula isakhiwo sokuqukethwe konke, siyinike ifomu elihle kakhulu. Ungakwazi ukuhlela amakhasi wewebhu ambalwa noma sonke isayithi ngokusekelwe kuzidingo zakho, kepha ikhwalithi yokuqukethwe ayiphazamiseki nhlobo. Leli thuluzi kufanelekile kumasayithi amakhulu kakhulu njenge-Amazon, eBay, PayPal, nabanye. I-Web2DB inezici ezihlukahlukene eziphambili futhi isisiza ukuba sithuthukise ukusebenza kwewebhu. Kuyinto ithuluzi elithembekile futhi olunzulu.
3. Thumela amafomu ewebhu:
Usebenzisa iWeb2DB, ungahambisa amafomu ewebhu ikakhulukazi amafomu okusesha kanye namafomu okubhuka enthanethi ngaphandle kokukhishwa. Amafomu angathunyelwa kuwo wonke amanani wokufaka, futhi idatha ekhishiwe itholakala kwifomethi ye-CSV. Ungakwazi futhi ukudala idatha eyisekelwe ngegama elingukhiye usebenzisa lolu hlelo bese uhambisa isayithi lakho ekusesheni izinjini zokukhomba nokuhamba kahle.
4. Ukusebenzisana namawebhusayithi e-Dynamic:
Esinye isici esihlukile seWeb2DB ukuthi singakwazi ukubhekana namawebhusayithi amabili ayisisekelo kanye ashukumisayo. Izinhlelo eziningi zokuqamba zakudala azikwazi ukukhipha okuqukethwe okufundwayo kumawebhusayithi amakhulu kakhulu. Ngisho nama-scrapers webhuchwepheshe abhekene nezindaba zokuvuna kumawebhusayithi e-AJAX, kodwa i-Web2DB yenza kube lula kuwe ukuthi ukhiphe idatha kusuka kumasayithi ashukumisayo. Kufanele ukhumbule ukuthi idatha ye-AJAX 'izothatha isikhashana ukukhishwa.
5. Ukusekela amafomethi ahlukene:
I-Web2DB ingathumela idatha yakho ekhishwe ku-Excel, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, ne-Excel. Ungasebenzisa futhi izikripthi zokuthekelisa ukwenza ngokwezifiso ukuthekelisa kwedatha uma unamakhono ayisisekelo okuhlela. I-Web2DB ingathumela ulwazi ku-Excel 2003 naku-Excel 2007 futhi ikusiza ukuthi ungene emifanekisweni yedatha yakho ngokucacile. Leli thuluzi linikeza ukuvikelwa kogaxekile , ukuqinisekisa ukuphepha kwakho nobumfihlo ku-intanethi.